WordPress: Etu esi ewu Tag Cloud Page | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 22, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu n'ime njirimara ohuru nke isiokwu m bu ihu igwe ojii. Na-amasị m igwe ojii, ma ọ bụghị maka nzube nke ha n'ezie. Cloudgwé ojii mkpado m gosipụtara bụ n'ezie ụzọ m ga-esi amata ma m na-anọ na isiokwu ma ọ bụ ozi blog m na-agbanwe n'oge.
New blogger akpakọrịta Al Pasternak, jụrụ ka esi ewu Tag peeji nke iji Ultimate Tag Warrior Plugin.
Nke a bụ otu esi: Wụnye ngwa mgbakwunye na gbanwee nhọrọ gị, ị na-etinye koodu na-esote na Template Peeji gị ebe egosipụtara ọdịnaya gị. Chọghị itinye ya n'ọnọdụ nke ọdịnaya gịDị n'akụkụ ya.
Tinye peeji a na-akpọ "Mkpado" ma hapụ ọdịnaya ihe efu. Voila! Ugbu a peeji ga-egosipụta na mkpado gị ígwé ojii!
Feb 22, 2007 na 4:53 PM
Igwe ojii nkpado gị na-ele anya nke ọma Doug! Wayzọ dị mma maka ndị na - agụ akwụkwọ ọhụụ mara ụdị ụdị ihe ị na - ede blọgụ.
Feb 22, 2007 na 4:56 PM
Dị ka enyi na enyi na aro, M nwere ike ikwu na ndabara na “Idenye aha na-ekwu site na email” igbe unselected.
Ọtụtụ mmadụ na-aza ngwa ngwa karịa ma ha anaghị ahụ obere nhọrọ ahụ. Mgbe ha malitere iji “e-mail” ezigara ha ozi email ma ha aghọtaghị ihe kpatara ya, ọ nwere ike iwe iwe.
Naanị ego m abụọ! 🙂
Feb 22, 2007 na 8:14 PM
Ana m enweta akara ngosi agwakọtara na ndebanye aha ndenye aha… a di na nwunye nke folks emailed me and gwara m na ha chọrọ ka ọ preselected nke mere na ha agaghị echefu ịdenye aha. Ọ ga-akara m mma imehie n'akụkụ preselecting. Ọ bụrụ na mmadụ azaghachi okwu gị, n'ezie ị ga-achọ ịma. Ma ọ mara mma ịpụ.
Feb 23, 2007 na 12:18 PM
Gotcha, ezigbo ihe.
Feb 24, 2007 n’elekere 11:14 nke abali
Ekwesịrị m ịtụgharị uche nke Doug ebe a.
Mgbe ị na-ede azịza, mmadụ esonye / bido ịkparịta ụka. Ya mere, echere m na ọ bụ ihe okike, na mmadụ ga-achọ ka amara gị ọkwa.
Feb 27, 2007 na 1:16 PM
Igwe ojii "dị mma"!
Nwere ike iji ihe karịrị otu agba were ezi uche.
Otu ụzọ iji agba na igwe ojii gị:
- họrọ isi agba, nye ya nnukwu font;
- “ngwakọta” agba a maka obere mkpụrụ akwụkwọ.
Ihe atụ "agba" na
Mee 4, 2007 na 6: 18 AM
Ana m agbal ịtọlite ​​blọọgụ ebe m nwere ike igosi ọtụtụ blọọgụ ndị ọzọ na igwe ojii mkpado. Nke a ọ ga-arụ ọrụ?
Mee 4, 2007 na 7: 43 AM
Na-akpali mmasị, Tom. Echeghị m na ngwọta a ga-arụ ọrụ ebe ọ bụ na ọ na-adọta naanị site na mkpado agbakwunyere na naanị blog a. Agbanyeghị, enwere ike ịdọta ma kpokọta mkpado site na iji API Teknụzụ ma ọ bụrụ na blọọgụ ọ bụla nọ na Technorati.
Na-ada ka obere ihe mmemme mmemme!
Ndewo Mr. Doug
M na-eji Jerome's Keywords Plugin iji mepụta mkpado-ojii. Ekwadoro m ka itinye Jerome's Keywords Plugin kama Ultimate Tag Warrior.
Echere m na Ultimate Tag Warrior kwa mgbagwoju anya iji. daalụ agbanyeghị.
Daalụ, Dendi! M gbakwunyere ihe dị ka ngwa mgbakwunye na okwu gị. Ekwenyere m na Ultimate Tag Warrior nwere ike ịbụ ntakịrị ụjọ.
Ndụmọdụ mara mma. Daalụ maka ịkekọrịta.